Maalin Qalin waa mid ka mid ah maalmaha ugu fiican iyo kuwa ugu muhiimsan ee ka mid ah nolosha. Waxaad mar kasta waxa ay soo xusuuso hadalka maalinta qalin jabinta, taas oo ah sababta waxaan ku soo bandhigaynaa inaad tobankii khudbado qalin qosol sare. Eeg mana joojin doonaa qosol.
Arjun khudbad cajiib ah oo isticmaalaya kaftan. Hadalka waa u qosol badan min biloow ilaa dhamaad. Arjun isticmaalo farabadan ah oo lagasoo xigtay funny uu hadalka. DHAGAYSTAYAASHA LOO jabsaday qosol gaar ahaan marka uu magaca Nicki Minaj ayaa loo isticmaalaa sida isagoo filasoof iyo soo jeediyay in heesteeda 'Baby waa aad adduunka' !! Arjun ka qeyb qaatay, waxaana ay si aad u wanaagsan looga faa'iideysan in uu hadalka ku talinaya in qof walba in ay hadda yihiin 'qalin' ah iyo caalamka waa u furan iyaga u.
Philosopher Nicki Minage wuxuu leeyahay,
Baby, waa taada
Meel, meel kasta
Baby waa aad dunida
War sow ma aha?
The 2aad video:
Midda labaadna waa ka fasalada ka qalan jebiya ee 2008 ee Dugsiga Sare ee East Jessamine. Qaybta u qosol badan waa uu ka duwan in dhismaha iskuulka uu la terminal garoonka diyaaradaha isagoo sheegay in ay tahay si uu u lahaa in uu qoro edbinta laba bog uu qoyskiisa weyn. Eeg dadka ka weyn 12 sano ee lasoo dhaafay oo ku abuureen isku xirnaansho gaar ah iyaga la. 12 sano ka badan oo adag oo xanuun badan dib u soo booqanayaa xasuus ah ee 12 sano ee lasoo dhaafay.
Waxa muuqata sida aan u dhan ka dib markii dhigay
1) Best Quote:
Waa waxaan la dhoola inta ka dhiman xagaagan oo laga yaabaa in xataa dheer haddii aanan u hesho in ay college ka dib.
Haddii ay 12 sano ee la soo dhaafay ay ahaayeen sida ugu fiican ee aad noloshaada ka dibna waxay ka dhigan tahay in ay jiraan wax qalad ah !!!
In ka badan laba iyo toban sano ee lasoo dhaafay waxaan lahaa sort qaar ka mid ah riyada ku saabsan waxan. Waxaan ku riyooday in aan istaagi lahaa ka hor inta aanad oo dhan oo aan ku odhan doonaa erayadayda in aan lagu sugayo in la maqlo laba iyo toban sannadood, oo laba iyo toban sano ee adag oo xanuun muddo dheer kuwa.
The video 3aad:
Khudbaddii qalin Isxaaq Hunt ee sanadka waa qosol min biloow ilaa dhamaad. Oo weliba wuxuu ahaa dhar gaab maalintii uu qalin iyo kor u yimid cayaaray, iyo naago gabya masraxa. Class ee sannadka 2011 isagoo sheegay in isagu ma uu lahaa hadalka u hagaajiyey. Waxaa lagu Waxa ugu fiican ee ku saabsan maalinta qalin jabinta ilaa helitaanka 7 am iyo helitaanka dugsiga ee baska isku dayo in la helo meesha ay ku fadhiista.
1) u qosol badan quote:
Song ka go'an in ay macallinka xisaabta:
Marna, marnaba, marnaba ,.
Waxaan marna kuma fekerin inaan abid heli lahaa taasi wax badan shaqada guriga.
Waxaan marna kuma fekerin inaan noqon doono ooyi
Waxaa jira oo keliya ma soo celiyo
Ma heli xisaabta this
Waxaan kaliya kaftan - waxaad tahay macallinka xisaabta jecel iyo tababare!
2) Quote laba:
Maanta waa maalintii ugu horeysay ee ay noloshooda inta ka hadhay oo sidaas waa berri.
The 4aad video:
The video afaraad waa eyadda ah oo dhan!
Hadalka dugsiga ka hor Jatin Muhar ahaa u qosol badan. Waxa uu ugu baaqay yada iyo waxa kaliya ee uu sheegay in uu ahaa
"Magacaygu waa Jathan Muhar iyo waxaan doonayaa inaan noqdo batman!"
The video shanaad waa ka Evan Biberdorf at College Rundle ah. Hadalka waa ee fasalada ka qalan ee 2013 ka.
Waxa uu ka tarjumaya ee la soo dhaafay iyo qorshee mustaqbalka. Waxa uu hadalka by leh waxa sharaf weyn u tahay in qof kasta si ay u awoodaan in ay dhagaystaan ​​uu hadalka.
Oo wuu xusuusan silsiladihiisii ​​gaarka ah ee u dhexeeya asxaabta iyo shaqaalaha hab funny iyo kaftan.
Uniform ayaa run ahaantii si wadajir ah noo barbaro, sida aan ka helnay dhibco la mid ah cuncun leh cambaarta sameeyey dhaaraheedii ay naga xoog badan.
Baranay xisaabta iyo Ingiriisi iyo xoogaa yar ee kimistari, macalinka lahaa cod aad u jilicsan - qaladkeyga ma !!
6-deedii video The:
Waxay bilaabaan hadalka ka sheegay in 'xaqiiqda ah in ay la soo xulay in ay aad maanta ku siin hadal bilaabaan, waa rajo idiin siiyo !! "Tani waxa ay ahayd hadal kaftan ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah casharada u dhiibay wanaagsan nolosha.
Sidoo kale waa in rajo idiin siiyo sida in kasta oo xaqiiqda ah in aan xaday mid ka mid ah saaxiibada kabaha iyo xidhin saxaarad rooti ee maqaayadda ah, waana in sidoo kale rajo idiin siiyo siin xaqiiqada ah in aan ka qaaday sawir aniga oo musqusha markaas bedelay madaxa by Mr. Wilson ee, (Madaxweynaha) isla markaana saaray buug yar oo akhri "xisbiga ee aan meel" oo aan weligood la qabto si fadlan noo sii.
"Waxaad tahay oo dhan oo ku saabsan in ay ka qalin jabiyay dugsiyada sare, si wayn hoos fursada ah in uu xabsiga."
Ayaa 7-dii video:
Safarka A muusikada iyada oo waayo-aragnimo ah ee dugsiga sare. Hadalka ayaa waxa ay ahayd iyadoo la raacayo music isagoo sheegay in waqti kasta haddii aadan ku raaxaysan hadalka kugu lagdaan dib u seexan. Hadalka wuxuu daboolayaa sano Freshman sannad ka tirsan. Your sano sare u noqon doonaa wax badan ka sahlan yahay saddexda hore. Best qeexo sida ay u dareensan yahay si ay u qalin.
"Waxaan aad u soo qulquli doona Yale! Ayaan marnaba run ahaantii sida sigaarka!"
8aad video The:
Wuu on hore in ay ka hadlaan wixii uu soo maray ee la soo xulay khudbaddii qalin ah. Waxaase yaab leh ayuu dareenkiisa markii uu u sheegay in uu soo xulay oo keliya ka hor. Waxa uu hilariously wuxuu leeyahay,
Mrs Holden saaray iyada gacanta ku wareegsan ayaan garbaha oo wuxuu ku yidhi Jon waxaan heysanaa wax walba oo muhiim ah si uu ugala hadlo, markan waqti aan ka dhaxlay qabashada fudud! Light oo madax ah ayaan kacay oo bilaabay inuu ku baxayn iyo nasiib wanaag Mrs Holden waxaa jiri lahaa in ay ii qabtaan sida had iyo jeer.
"Xukun Good timaada waayo-aragnimada - waayo-aragnimo ka yimaado xukunka xun."
Statistics oo ka mid ah fasalka
71% oo ka mid ah dadka lab ayaa shil gaari ah
25% maxkamad baabuur wadidda ku campus ama ordaya sare ee qof ee gaariga
100% ku dhex Karimo Waddooyin badan buugaagta akhriska eedeeyay!
The 9 video:
Hadalka Tani waxay ku dhufan doonto dhidibkii ah ee madaxa. Waxaa sheegayaa ardayda aan walwalo fasalada ama calaamado laakiin waxaa xaq ugu noqon karaa oo waa inaad u samaysaa marayo doonaa.
"Waxa aan ka shaqeeyey adag ku hadalka ka badan oo ku saabsan dhan aan shaqada guriga iyo shaqooyinka oo aan halkaan dhab ahaantii qoray in gaariga ii ambabbixisaan!"
"Waxaan 2,36 iyo haatan, anigu waxaan ahay Doctor ah. Haddii uu qof ku weydiiyo waa jiraan Doctor ah halkaan, waxaan dhihi karaa haa tahay, ka dibna daawado iyaga u dhintaan."
The 10aad video:
Video Tani waa mid ka mid ah video ugu xiisaha badnaa ee ugu-. Heerka qalin-2008 hadalka u dhiibay wakiilka fasalka koriyo hadalka u leh wax badan oo kaftan leh laakiin farriin wanaagsan. Fariinta muhiimka ah ee this video ma in ay lumiyaan rajo, mar walba isku dayaya oo ku jahaaday jidka ugu fiican.
Xitaa fasalka waayeelka ah ayaa iyada oo loo marayo tiro ka mid ah xarigga ka hor u hoggaansanaayeen siyaasadda imaanshaha dugsiga!
Haddii aadan aqoon sida aad u nafisto oo ka soo gubin doona
Ma ogtahay inta jeer ee aan ku qaaday oo aan gacantayda oo laga soo saaray oo ku saabsan taariikh? Naftaada booli!
Sida loo sameeyo A Qalin-Cod iyo Muqaal
> Resource > Top List > 10 qosol Qalin-Hadalka